သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကိုတိုးတက်စေရန် Google Analytics ကိုအသုံးပြုနည်း။ Martech Zone
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကိုတိုးတက်စေရန် Google Analytics ကိုအသုံးပြုနည်း
တနင်္ဂနွေ, မေလ 31, 2015 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
တခါတရံသူတို့ကသူတို့နာမကိုပြောင်းလဲသင့်တယ်ထင်ပါတယ် analytics သို့ မေးလ် သောကြောင့်, analytics သင်ရှာဖွေနေသည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုမထင်မမှတ်ဘဲ…မကြာခဏမေးခွန်းများထုတ်ပေးလေ့ရှိသည်။ filter များ၊ segments များနှင့်ဇယားများနောက်ကွယ်ရှိအချက်အလက်များကိုသင်နားမလည်ပါကသင်တိကျစွာအစီရင်ခံစာများကိုမည်သို့ဆွဲယူသည်ကို အခြေခံ၍ သင်ထင်မြင်ယူဆချက်အချို့ကိုသင်လုပ်ကောင်းလုပ်လိမ့်မည်။
အချက်အတွက်ဖြစ်ရပ်မှန်မှာရှေးရှေး Quicksprout ဒီစိုးရိမ်ဖွယ်စာရင်းဇယားပေး:
လက်လီရောင်းချသူများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် Google Analytics ကိုမှားယွင်းစွာအသုံးပြုနေကြသည်။
နီးလ် Patel က, Quicksprout
အသုံးပြု။ အော်ဂဲနစ်အသွားအလာတိုးမြှင့် SEO မေးမြန်းမှု နှင့် ဆင်းသက်စာမျက်နှာအစီရင်ခံစာများ.
အသုံးပြု။ အော်ဂဲနစ်အသွားအလာတိုးမြှင့် အသွားအလာအရင်းအမြစ်များသော့ချက်စာလုံးများအစီရင်ခံစာ.
သုံး၍ နောက်ထပ်ယာဉ်ကြောမောင်းနှင်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ရန်အချိန်ပိုဖြုန်းပါ အသွားအလာရင်းမြစ်ထိပ်တန်းရည်ညွှန်းအစီရင်ခံစာ.
သုံး၍ သင်၏ပရိသတ်နှင့်ပဲ့တင်ထပ်နေသောအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုထုတ်လုပ်ပါ အကြောင်းအရာခြုံငုံအစီရင်ခံစာ.
အသုံး ထုံးစံအစီရင်ခံစာများ ထူးခြားတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအတွက်။
Tags: ပရိသတ်အကြောင်းအရာခြုံငုံအစီရင်ခံစာထုံးစံအစီရင်ခံစာများanalytics googleGoogle analytics ဆင်းသက်စာမျက်နှာများgoogle ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ seoဘယ္လိုGoogle Analytics ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲမိုဘိုင်းအစီရင်ခံစာquicksproutအသွားအလာအရင်းအမြစ်များသော့ချက်စာလုံးအစီရင်ခံစာအသွားအလာရင်းမြစ်ထိပ်တန်းရည်ညွှန်းအစီရင်ခံစာအသုံးပြုသူများသည်အစီရင်ခံစာစီးဆင်းသည်